Donald Trump oo hanjabaad kale u jeediyay hay'adda caafimaadka aduunka
Trump oo hanjabaad kale u jeediyay hay'adda caafimaadka aduunka
By VOA + GO
Trump ayaa bishii tagtay si ku-meel gaar ah u joojiyey tabarucaaddii Mareykanka ee WHO.
WASHINGTON, US - Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii ku hanjabay inuu si joogto ah u joojin doono maal-gelinta hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, haddii aysan ballan-qaadin inay horumarro ku sameyn doonto 30 maalmood gudahood.
Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu dib uga fakari doono xubinnimada Mareykanka ee hay’addaas.
Trump ayaa bishii tagtay si ku-meel gaar ah u joojiyey tabarucaaddii Mareykanka ee WHO, isaga oo ku eedeeyey inay taageereyso “akhbaaraadka qaldan” ee Shiinaha ay ka bixinayaan cudurka Coronavirus, eedeymahaas oo WHO ay beenisay.
“Haddii WHO aysan ku ballan-qaadin horumarro weyn oo la taaban karo 30-ka malamood ee soo socda gudahood, waxaana hakinta ku-meel gaarka ah ee aan ku sameeyey maal-gelinta WHO ka dhigi doonaa mid joogto ah, waxaana dib uga fakari doonaa xubnnimadeeda,” ayuu Trump ku sheegay warqad uu u diray agaasimaha WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo uu twitter-ka soo dhigay.
Trump ayaa horey u sheegay in WHO ay sameysay “shaqo laga niyad jabo” marka ay timaado habka ay ula tacaashay fayruska, islamarkaana uu dhowaan qaadan doono go’aanka Mareykanka ee maal-gelinta WHO.
Warqaddan ayaa Trump waxa uu ku sheegay in waddada kaliya ee horey loogu socon karo ay tahay in WHO ay muujiso inay ka madax-banaan tahay Shiinaha, wuxuuna intaas ku daray in maamulkiisa uu goor horeba billaabay wada-hadallo dib u habeyn oo uu la leeyahay Tedros.
WHO ayaa Isniintii sheegtay in dib u eegis madax banaan oo lagu sameynayo jawaabta caalamka ee Coronavcirus loo billaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan, islamarkaana taageero iyo ballan-qaad maal-gelin oo weyn ay ka heshay Shiinaha, oo ah dalka uu fayruska kasoo billowday.
VOA + GO
Soomaaliya ma saameyn doonaa go'aanka Trump ee liddiga ku ah WHO?
Soomaliya 16.04.2020. 07:00
Xili kiisaska ay sii kordhayaan saameynta ma waxay noqon doontaa mid toos ah ama mid dadban?
Donald Trump oo dhaqan-geliyey hanjabaadii ka dhanka ahayd WHO
Afrika 15.04.2020. 05:51
Maxay isku hayaan Trump iyo madaxa hay'adda caafimaadka Aduunka?
Caalamka 09.04.2020. 15:30
WHO oo farta ku fiiqday "asalka" uu ka dhashay safmarka Coronavirus
Caalamka 02.05.2020. 03:10
Ruux doonayey in uu Toorey ku dilo Donald Trump oo la qabtay
Caalamka 10.02.2020. 08:40
Go'aan liddi ku ah xayiraad uu Trump saarey Soomaaliya oo la shaaciyey
Soomaliya 07.12.2019. 22:16
Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo u abaabulaya shir saddexaad
Caalamka 26.06.2019. 15:27
Maraykanka oo Xayiraadii ka qaaday Qaxootiga
Caalamka 30.01.2018. 09:19
Galmudug oo amar kasoo saartay Masjid ay xireen booliska Soomaaliya 04.06.2020. 19:38